I-Nathan Bedford Forrest kwiMfazwe yombutho
I-Bed Bedford yaseFranford - Ubomi bokuqala:
Wazalelwa ngoJulayi 13, 1821 e-Chapel Hill, TN, uNathan Bedford Forrest wayengumntwana omdala (wabalishumi elinesibini) kaWilliam noMiriam Forrest. Umkhweli, uWilliam wasweleka ngumkhuhlane omnyama xa unyana wakhe wayeneminyaka elishumi elinesixhenxe kuphela. Isifo saso sacela udadewabo kaForrest, uFanny. Ukufuna ukwenza imali ukuxhasa unina kunye nabazalwana bakhe, u-Forrest waya kwishishini kunye nomalume wakhe, uJonathan Forrest, ngo-1841.
Ukusebenza kuHernando, MS, eli shishini libonakalisiwe elifutshane njengoko uYonatan wabulawa kwingxabano emine kamva. Nangona kwakungenasiphelo kwimfundo esemthethweni, i-Forrest yabonisa ukuba ngumphathi-shishini onomsebenzi kwaye ngama-1850 asebenze njengomphathi we-steamboat kunye nomthengisi wekhoboka ngaphambi kokuba athenge iintlobo ezininzi zeepotton entshonalanga eTennessee.
I-Nathan Bedford Forrest - Ukujoyina iMpi:
Emva kokuhlanganisa i-fortune enkulu, i-Forrest yonyulwa i-alderman eMemphis ngo-1858 kwaye yanikela ngoncedo lwemali kunina kunye nokuhlawulwa kwabafundi beekholeji. Omnye wabantu abacebile kakhulu eMzantsi xa iMfazwe yoLuntu yaqala ngo-Apreli 1861, wabhalisa ngasese kwi-Confederate Army kwaye wabelwa kwi-Nkampani E yeTennessee eFake iRifles ngoJulayi 1861 kunye nomntakwabo omncinane. Ukuxhatshazwa yinto yokungahambi kweeyunithi, wazinikela ukuthenga amahashe kunye negesi kwirejistra epheleleyo kwimali yakhe.
Ukuphendula kwesi sibonelelo, uGrusta u-Isham G. Harris, owayemangaliswe kukuba umntu waseForrest wayesebenze ngasese, wamxelela ukuba aphakamise ibutho lamabutho aphakamileyo kwaye athathe isikhundla se-lieutenant colonel.
I-Nathan Bedford Forrest - Ukunyuka Ngezigaba:
Nangona esweleka naluphi na uqeqesho olusemthethweni lomkhosi, uForrest waba ngumqeqeshi onobuchule kunye nenkokeli yamadoda.
Eli qhawe likhawuleza likhule libe liqela eliwa. NgoFebruwari, umyalelo weForrest uqhutywe ukuxhasa inkxaso kaGrigadier General uJohn B. Floyd e-Fort Donelson, TN. Ukuqhutyelwa kwi-fort yimikhosi ye-Union phantsi kwe- Major General u-Ulysses S. Grant , iForrest kunye namadoda akhe athatha inxaxheba kwi- Battle of Fort Donelson . Ngenxa yokukhusela i-fort eduze nokuwa, i-Forrest iholele umthamo womyalelo wakhe kunye neminye imikhosi kwimpumelelo yokuphunyuka eyabonayo yaya kwi-Cumberland River ukuze igweme imigca yeManyano.
Ngoku u-colonel, u-Forrest wagijima waya eNashville apho wayenceda ekukhutsheni izixhobo zorhwebo ngaphambi kokuba isixeko sibhekane neMikhosi ye-Union. Ukubuyela kwisenzo ngo-Apreli, i-Forrest isebenzisana nabaGedali u-Albert Sidney Johnston kunye no- PGT Beauregard ngexesha leMfazwe yaseShilo . Ekugqibeleni kwe-Confederate ukunqotshwa, iForrest yanikela umgcini emva komkhosi we-Retreat kwaye yalimala kwi-Fallen Timbers ngo-Ephreli 8. Ukufumana kwakhona, wathola umyalelo wabasemagunyeni abasanda kuqeshwa. Ukusebenza ukuqeqesha amadoda akhe, i-Forrest yaqhutyelwa kwi-central Tennessee ngoJulayi kwaye yawayisa uMbutho waseMurfreesboro.
Ngomhla ka-21 Julayi, iForrest yaphakanyiswa ibe yi-brigadier jikelele. Emva kokuba eqeqeshe ngokupheleleyo amadoda akhe, wavutha ngoDisemba xa umkhosi we-Army of Tennessee, uGeneral Braxton Bragg , wammisela kwelinye iqela lamanqabileyo.
Nangona amadoda akhe ayengahlanjulwanga kwaye ayiluhlaza, i-Forrest yalelwa ukuba iqhube i-Tennessee yiBragg. Nangona bekholelwa ukuba imishini yokugula ingacetyiswa phantsi kweemeko, i-Forrest yenze iphulo elimangalisayo lokuqhubela phambili elaphazamisa imisebenzi yeNyunyana kule ndawo, ikhusele izixhobo zamadoda akhe, kwaye ilibazise i-Grant Vicksburg Campaign .
I-Nathan Bedford Forrest - Engafanekiyo:
Emva kokuchitha inxalenye yokuqala ye-1863 eqhuba imisebenzi encinci, i-Forrest yalelwa enyakatho ye-Alabama naseGeorgia ukuba ilandele iqela elikhulu eliManyeneyo elikhokelwa nguColonel Abel Streight. Ukufumana intshaba, i-Forrest ihlaselwa i-Streight kwi-Day's Gap, AL ngo-Ephreli 30. Nangona iqhutywe, i-Forrest ilandele imikhosi yeNyunyana iintsuku ezimbalwa ize iphoqele ukuzinikela kwayo kufuphi neCedar Bluff ngoMeyi 3. Iya ku-Bragg Army yaseTennessee, i-Forrest ithathe inxaxheba kwi-Confederate ukunqoba kwi- Battle of Chickamauga ngoSeptemba.
Kwieyure emva kokusinqoba, akazange acele ukuba uBragg alandele umkhosi kwiChattanooga.
Nangona watsho uBragg emva kokumkhanyela komlawuli ukuba alandele umkhosi omtsha owawubetha uMajer General William Rosecrans , iForrest yayalalelwa ukuba ithathe umyalelo ozimeleyo eMississippi kwaye yafumana ukukhuthazwa kwintloko ngokubanzi ngomhla weDisemba 4. Ukuhlaselwa ngasentla entwasahlobo ka-1864, umyalelo weForrest bahlasele i-Fort Pillow eTennessee ngo-Apreli 12. Ngokugqithiseleyo imikhosi yama-Afrika-yaseMerika, ukuhlaselwa kwehlelwa yinto yokubulawa kwabantu kunye nebutho le-Confederate ekunciphiseni amajoni amnyama naphezu kwemizamo yokuzinikela. Inxaxheba ye-Forrest ekubulaweni kwabantu kunye nokuba ingaqulunqwa yinto engumthombo wokuphikisana.
Ukubuyela kwisenzo, i-Forrest yaphumelela ukuphumelela kwakhe ngoJuni ngo-10 xa wawaxabela uSigrigadier General uSamuel Sturgis kwi- Battle of Brice's Crossroads . Nangona bekuninzi kakhulu, i-Forrest isebenzisa umxube obalaseleyo wokuhamba, ulwaphulo kunye nomhlaba ukuya kumyalelo we-sturgis 'kwaye ubambe amajele angama-1,500 kunye neengalo ezininzi kwiinkqubo. Ukunqoba kwakusongela imigangatho yokubonelela kweManyano eyayixhasa i- General General William William T. Sherman malunga neAtlanta. Ngenxa yoko, uSherman wathumela umkhosi phantsi kweMeja Jikelele u-AJ Smith ukujongana neForrest.
Ukuxoshela eMississippi, uSamson waphumelela ukunqoba iForrest kunye noLieutenant General Stephen Lee kwiMfazwe yaseTupelo phakathi noJulayi. Naphezu kokutshatyalaliswa, i-Forrest yaqhubeka ihlasele i-Tennessee ekuhlaseleni kunye nokuhlaselwa eMemphis ngo-Agasti no-Johnsonville ngo-Oktobha.
Waphinda walwa ukuba ajoyine i-Army yaseTennessee, ngoku ekhokelwa nguGeneral John Bell Hood , umyalelo weForrest unikezele ngamagosa asebukhosini ukuba aqhubeke nxamnye neNashville. Ngomhla kaNovemba wama-30, waphikisana ngokugqithiseleyo ngeHood emva kokuvunyelwa imvume yokuwela uMlambo waseHarpeth waza wanqumla umgca weManyano wokubuyela emva kwe- Battle of Franklin .
I-Beth Bedford Forrest - Iimpawu zokugqibela:
Njengoko iHood yachitha umkhosi wayo ngokuhlaselwa ngokusesikweni kwi-Union, i-Forrest yaqhutyula ngaphesheya komlambo ngenzame yokuguqula iNyunyana, kodwa yatshitshiswa ngabagibeli beentlanga ezikhokelwa nguMagosa Jikelele uJames H. Wilson . Njengoko iHood yaqhubekela phambili e-Nashville, amadoda akwaForrest ayexhatshazwa ukuhlasela indawo yaseMurfreesboro. Ukuhlangana, ngomhla wama-18 kuDisemba, iForrest yayigubungela i-Confederate emva kokuba iHood yachithwa kwi- Battle of Nashville . Ngenxa yokusebenza kwakhe, waphakanyiswa ekubeni ngu-lieutenant jikelele ngoFebruwari 28, 1865.
Ngokunqotshwa kweHood, i-Forrest yashiywa ngokufanelekileyo ukukhusela iNorthern Mississippi neAlabama. Nangona yayingekho mkhulu, wachasa ukuhlasela kukaWilson kummandla ngoMatshi. Ngethuba lephulo, i-Forrest yahlulwa kakubi eSelma ngo-Aprili 2. Ngomkhosi weManyano ujikeleza indawo, umphathi weSebe laseForrest, uLieutenant General Richard Taylor , wakhetha ukuzinikela ngoMeyi 8. Ukuzinikela eGainesville, AL, iForrest idilesi kumadoda akhe ngosuku olulandelayo.
I-Nathan Bedford Forrest - Kamva Ubomi:
Ukubuyela eMemphis emva kwemfazwe, i-Forrest yafuna ukuvuselela i-fortune yayo eyonakalisiwe. Ukuthengisa izityalo zakhe ngo-1867, naye waba yinkokheli yokuqala yeKu Klux Clan.
Ekholelwa ukuba inhlangano ibe liqela elithandwayo lobuzwe elinikezelwe ukunyusa amaAfrika-aseMerika kunye nokuphikisana kwakhona kwakhona, wancedisa kwimisebenzi yalo. Njengoko imisebenzi yeKKK yaba yinto enobudlova kwaye ingalawulwa, yalela ukuba iqela lidibanise kwaye lahamba ngo-1869. Ngeminyaka emva kwempi, i-Forrest yafumana umsebenzi kunye noSelma, Marion, noMnquis Railroad kwaye ekugqibeleni waba ngumongameli wenkampani. Ukukhathazeka yi-Panic ka-1873, i-Forrest yachitha iminyaka yokugqibela eqhuba ipulazi yomsebenzi wasejele e-Island's Island kufuphi neMemphis.
I-Forrest yafa ngo-Oktobha 29, 1877, eninzi isifo sikashukela. Ekuqaleni wangcwatywa eMangcwabeni e-Elmwood eMemphis, isalathiso sakhe sathunyiswa ngo-1904 ukuya epaki yaseMemis ebizwa ngozuko lwakhe. Ihlonishwa kakhulu ngabachasi abafana noGrant noSherman, i-Forrest yaziwa ngokuba isebenzise ukulwa nemfazwe kwaye idlalwa ngokugqithisileyo ngokuthi ifilosofi yayo yayikuthi "i-git thar iyona inqabileyo kakhulu." Kwiminyaka emva kwemfazwe, iinkokeli eziphambili ze-Confederate ezifana noJefferson Davis kunye noGregory Robert E. Lee babonisa ukuzisola ukuba izakhono zaseForrest zazingasetyenziswanga ngakumbi.
I-NNDB: iNathan Bedford Forrest
Imfazwe yombutho: uNathan Bedford Forrest
UNathan Bedford Forrest Biography
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uGideon J. Pillow
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseCold Harbour
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yasePeachtree Creek
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uBenjamin Butler
Imfazwe YaseMerika-Imbali Efutshane
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uGarl Schurz
Indlela yokufumana i-Predicate kwisivakalisi
Konke Okufuneka Ukwazi NgeMfazwe Yehlabathi I
7 Iifrimu Ezinkulu zihamba kunye no-Ingrid Bergman
Uludwe lweeMpawu eziMandla ezinkulu kwiMbali yaseMerika
Ubufazi Bokuba "Banjwe"
Iziphazamiso eziPhakamileyo ezili-10